आकर्षक ब्याजमा पब्लिकको थोरै रकम पनि निक्षेपमा ल्याउन सकिन्छ - Karobar National Economic Daily
आकर्षक ब्याजमा पब्लिकको थोरै रकम पनि निक्षेपमा ल्याउन सकिन्छ
query_builderMarch 20, 2017 11:06 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1177
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी । तस्विर : पूर्णिमा श्रेष्ठ
तत्कालीन ग्रिनलेज बैंकबाट बैंकिङ क्यारिअर सुरु गरेका सुनिल केसीले ९ वर्षअघि एनएमबी बैंकमा डेप्युटी म्यानेजरबाट काम सुरु गरेका थिए । ९ वर्षअघि एनएमबी बैंक प्रवेश गरेका केसीले भर्खर मात्र सोही बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
वित्तीय प्रणालीमा देखिएको कर्जा, निक्षेप र पुँजीको अनुपात (सीसीडी)को सिमा ८० प्रतिशत तोकिएको भए पनि त्यो सिमामा रहेर कर्जा प्रवाह गर्न समस्या देखिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा नै समस्या आएको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूको लगानीसमेत रहेको एनएमबी बैंकको जिम्मेवारी लिएका केसीले वित्तीय प्रणालीको समस्याका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदरमा कमी आएको बताउँछन् ।
भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण बैंकहरूले लगानीका अवसरहरू विस्तार गर्ने क्रममा निक्षेप वृद्धि हुन नसक्दा कर्जा प्रवाह गर्न जटिलता आएको उनको बुझाइ छ । विज्ञान विषय अध्ययन गरेका केसीले वित्तीय क्षेत्रमा काम सुरु गरेपछि मात्र व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका हुन् ।
केन्द्रीय बैंकले हालको समस्या सम्बोधन गर्न उत्पादनमूलक कर्जाको ५० प्रतिशत र विपन्न वर्ग कर्जालाई सीसीडी रेसियोमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको बताउने केसीले आफ्नो बैंकको सीसीडी रेसियो ७४ प्रतिशतमा रहेको जानकारी दिए । केन्द्रीय बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार एनएमबी बैंकको सीसीडी रेसियो ६८ प्रतिशतमा आउने तर्क उनको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा २ दशकभन्दा धेरै समय बिताएका केसीले एनएमबी बैंकलाई सर्वसाधारणसामु अझै लोकप्रिय बैंकको रूपमा स्थापित गराउने लक्ष्य राखेका छन् । समग्र वित्तीय प्रणालीको अवस्था तथा एनएमबी बैंकको आगामी योजना तथा नयाँ रणनीतिबारे केसीसँग कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानी ः
तपाईंंको विचारमा पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको वास्तविक समस्या के हो ?
वित्तीय प्रणालीको समस्या आजको भोलि नै देखिएको होइन । विगत लामो समयदेखि नै समस्या आए पनि बाहिर ढिला आएको हुनाले पछिल्लो समयमा चर्चा भएको हो । रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदरमा आएको कमीले पनि समस्या बढ्नुमा सहयोग गरेको हो । पछिल्लो समयमा विदेशिने नेपाली कामदारको संख्यामा आएको कमीले रेमिट्यान्सका कारण देखिएको आर्थिक वृद्धिमा कमी आउने स्पष्ट भएको थियो ।
यो समस्या आउनुमा आजभन्दा करिब डेढ वर्षअघि नै संकेत देखिएको थियो । बैंकहरूले नबुझेका कारण समस्या आएको भन्ने हल्ला गलत हो । बैंकहरूलाई पूर्व जानकारी नै थियो । बैंकहरूले यस्तो समस्या आउन सक्छ, कर्जा प्रवाहमा नै संकुचन आउन सक्छ भन्ने भए पनि लगानी विस्तारको गतिलाई केही कम गर्नु पथ्र्यो ।
हालसम्ममा जति पनि नेपालको व्यापार घाटालाई रेमिट्यान्सले धान्दै आएको थियो । नाकाबन्दीपछि आयात पनि बढेकाले व्यापार घाटाभन्दा रेमिट्यान्सको आप्रवाह वृद्धिदरमा कमी आउन थालेपछि बैंकहरू समस्या आउनेमा निश्चिन्त थिए ।
गतवर्ष आर्थिक वृद्धि नै एक प्रतिशतभन्दा थोरै हुने वित्तिकै यो वर्ष लगानी विस्तार हुने निश्चित थियो । नयाँ योजनाहरू आइरहेकाले बैंकहरूमा कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । माग बढेअनुसार बैंकहरूले कर्जा दिए । बैंकहरूमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) को अभाव भएको होइन । बैंकहरूको समस्या भनेको कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नु हो ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने पूँजीको अभाव भएको हो । बैंकहरूले पुनर्निर्माण तथा विकास निर्माणका काम हुने भएकाले त्यो पैसा वित्तीय प्रणालीमा आउने अपेक्षा गरे पनि त्यो सफल नहुँदा समस्या देखिएको हो ।
राजनीतिक वातावरण पनि स्थिरता उन्मुख थियो । त्यसका साथै सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेकाले वित्तीय प्रणालीको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता कमजोर भएको हो । सरकारको २ सय अर्ब रूपैयाँ ढुकुटीमा रहनुले पनि समस्या बढेको हो । सरकारले विकास खर्च नगर्दा वित्तीय प्रणालीमा भएको निक्षेप कर्जामा परिणत भयो । नयाँ निक्षेप नआएपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका हुन् ।
सरकारी खर्च नहुने समस्या विगतकै हो, बैंकहरू परम्परागत निक्षेपमा भर परेर यसको वैकल्पिक उपाए किन खोजी गर्न सकेनन् ?
नेपालमा हालसम्म निक्षेपको वैकल्पिक उपाय भन्ने छैन । पुँजी बजारको प्रयोग गरेर कर्जा वा वासलात मार्फत फन्ड संकलन गर्ने प्रचलन नेपालमा सुरु भएकै छैन । निक्षेपको स्रोत भनेकै विप्रेषण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र सरकारले खर्च गरेको खण्डमा आउने पैसा मात्र हो ।
नेपालको बैंकलाई बाहिर गएर पैसा उठाउन सक्ने पहुँच पनि छैन । नेपालभित्रै पनि त्यस्तो अवस्था बनेको छैन । बैंकहरूले लगानीका लागि भर पर्नुपर्ने निक्षेपमा नै हो । त्यसमा वैकल्पिक स्रोतभन्दा पनि जुन रूपमा निक्षेप परिचालन गर्नु पथ्र्यो त्यो अनुसार हुन नसकेको हो ।
हाल बैंकहरूले एउटै निक्षेपका लागि तानातान गरेको अवस्था छ, यसले ब्याजदर पनि बढेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाल वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको सन्दर्भमा मिस म्याचको समस्या छ । वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको आवश्यकता भएकाले कसरी हुन्छ निक्षेप आकर्षण गर्ने नीति लिनु सामान्य हो । यसले ब्याजदर बढ्न जान्छ ।
आकर्षक ब्याजदर पाएको खण्डमा पब्लिकसँग भएको पैसा वा पुँजी बजारमा रहेको पैसा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको रूपमा आउने सम्भावना हुन्छ । तर, अहिले तिव्र गतिमा निक्षेप बढाउनुपर्ने भएकाले बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक नै हो । हालको समयमा एक बैंकको निक्षेप अर्को बैंकमा सर्नु सामान्य हो भन्नुपर्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र विकास खर्च हुन नसक्ने समस्या त पुरानै हो नि ?
बैंकहरूले निश्चित नियमभित्र रहेर काम गरेका हुन्छन् । सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गर्छ भने त्यसको ४ देखि ५ गुणासम्म वित्तीय प्रणालीको वृद्धि हुनु सामान्य हो ।
बैंकहरूले गरेको ग्रोथ आक्रामक पनि होइन । तर, सरकारले खर्च गर्न सकेन । बैंकहरूले मात्र चाहेर भन्दा पनि वित्तीय प्रणालीका सबै सरोकारवाले यो विषयमा सोचेर काम गरेको भए यस्तो समस्या आउने थिएन । केही कमजोरी भएका हुन सक्छन्, अस्वाभाविक वृद्धि भएको छैन । त्यो अनुसारको वृद्धिका लागि आर्थिक गतिविधि पनि बढ्नुपर्छ ।
हामीले सधैं रेमिट्यान्सलाई नै आधार बनाएको खण्डमा समस्या आउने निश्चित छ । तर, वित्तीय प्रणालीको वृद्धिका लागि बैंकहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बैंकहरू ग्रामीण भेगमा गएर सानो सानो निक्षेप ल्याउने अभ्यास गर्नु जरुरी छ ।
कतिपयले पुँजी वृद्धिको नीतिले वित्तीय प्रणालीमा समस्या आएको हो भन्छन् नी, तपाईंलाई के लाग्छ ?
समस्याभन्दा पनि बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको नीति आवश्यक पनि थियो । पुँजी वृद्धिको नीति ठीक छ । बैंकिङ विजनेस भनेको जोखिमसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले पुँजी बढाउनु राम्रो हो । पुँजी बढाइसकेपछि त्यसमा सरकारको पनि केही जिम्मेवारी छ होला ।
बैंक वित्तीय संस्था ग्रोथको फेजमा गएको अवस्थामा सरकारले पनि कुनै न कुनै माध्यमवाट बारिह ल्याउनुपर्ने थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउनु भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि समस्या आउने हो । यो क्षेत्र विस्तार भएको खण्डमा साना तथा ठूला सबै उद्योग धन्दालाई सहज हुन्छ ।
लामो समयपछि बैंकिङ इन्डष्ट्रिज समस्यामा परेको जस्तो भएको छ । यसका लागि सरोकारवालाहरू सबै मिलेर सम्बोधन गर्न खोजेको खण्डमा समाधान हुन्छ । बैंकहरूलाई मात्र गाली गरेर समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बैंकहरूले पुँजी वृद्धि अनुसारको आम्दानी गर्न व्यवसाय विस्तार गर्नु सामान्य हो । पुनर्निर्माणका लागि त्यत्रो पैसा आउने कुरा थियो ।
सरकारले पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च गर्ने तथा विदेशी लगानी भिœयाउने कुरा थियो । त्यो अनुसारको लगानी बैंकहरूले गरेका हुन् । पहिले भन्दा केही छिटो लगानी विस्तार भएको हुनसक्छ । तर, सरकारले गरेको योजना अनुसार कुनै पनि खर्च नबढ्नु नै समस्या हो ।
बैंकहरूले कल डिपोजिटको गलत प्रयोग गरे भन्छिन नि, पछिल्लो समयमा सेभिङ पैसा कल डिपोजिटमा ट्रान्फर पनि भएको देखिन्छ, किन ?
नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङमा नै कल डिपोजिटको प्रचलन छ । कल अकाउन्ट भन्नाले विजनेश एकाउन्टसँग जोडिन्छ । सामान्यतः कल अकाउन्ट जानकारी दिएर पैसा झिकिन्छ ।
कल अकाउन्टका कारण समस्या आएको भए पनि बैंकहरूले सर्ट टर्मका लागि प्रयोग गर्छन् । वासलातमा हेर्दा पनि कल अकाउन्ट देखिन्छ । त्यसलाइ सेभिङसँग तुलना गर्दा भन्दा पनि सुक्ष्म व्यवस्थापन हुँदा असहज भएको भए पनि त्यस्तो ठूलो समस्या हुँदैन ।
केन्द्रीय बैंकले पनि सेभिङभन्दा कल अकाउन्टको ब्याजदर धेरै हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण कल अकाउन्ट प्रयोग भएको होला । नियामकको नयाँ व्यवस्थापछि नियन्त्रण हुनेछ ।
विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाहमा एनएमबी बैंकको अवस्था कस्तो छ ?
एनएमबी धेरै शाखा भएको बैंक हो । हालको समयमा बैंकहरू आफैंले प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जा चुनौतीपूर्ण काम हो । हाम्रो अहिलेको संरचना अनुसार करिब १ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ प्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
एनएमबी बैंकका ७८ शाखा छन् । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गएर कर्जा प्रवाह गर्न सहज नै होला । तत्कालका लागि सुरु भइसकेको भने छैन । केन्द्रीय बैंकले तोकेको समयमा पु¥याउँछौं । बैंकका शाखालाई प्रयोग गरेर भिन्न तरीकाबाट यो क्षेत्रमा काम गर्छौं ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरेको लगानीको ५० प्रतिशत र विपन्न वर्ग कर्जालाई सीसीडी रेसियोमा गणना नहुने भएको छ । यसले तपाईंहरूलाई कस्तो फाइदा भएको छ ?
केन्द्रीय बैंकले बजारको समस्यालाई समाधान गरेको हो । एनएमबी बैंकको मात्र हेर्ने हो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा तथा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जालाई समावेश नगर्दा पनि सीसीडी रेसियो ७४ प्रतिशत मात्र छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएको छुटलाई प्रयोग गर्दा एनएमबी बैंकको सीसीडी रेसियो करिब ६८ प्रतिशतमा हुन्छ । वित्तीय प्रणालीमा समस्या आउँदा नाफाभन्दा पनि समस्यालाई सहज फेस गर्ने गरी काम गर्ने हो । निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्दै काम गर्ने हो । हामीसँग भएको क्षमता अनुसार कर्जा लगानी गर्ने अवसर छ । तर, यो व्यवस्था दीर्घकालीन नभएकाले बजारको अवस्था चलायमान हुन सक्ने भएकाले सुरक्षित भएर बस्ने योजना छ ।
बैंकको पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने योजना कहाँ पुर्याउनु भएको छ ?
बैंकको हालको चुक्ता पुँजी करिब साढे ५ अर्ब पुगेको छ । अगामी जुलाईसम्ममा ८ अर्ब पुग्छ । पुँजी वृद्धिका लागि ४ वटा वित्तीय संस्थासँग मर्जर गरेका छौं । त्यसपछि नेदरल्यान्डको डेभलपमेन्ट बैंक (एफएमओ)ले सेयर स्वामित्व बढाएको छ । त्यो क्रममा हामीले प्रिमियम कायम गरेका थियौं । त्यो प्रिमियमले पनि चुक्ता पुँजी बढाउने कुरामा सहयोग गरेको छ ।
नेदरल्याण्डको बैंकबाट एनएमबी बैंकमा आएको प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी वित्तीय क्षेत्रकै सबैभन्दा धेरै हो । करिब २ अर्ब त चुक्ता पुँजीकै रूपमा आएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले पनि ल्याएका छैनन् । गत वर्ष पनि एक अर्बभन्दा धेरै नाफा गरेका थियौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा पनि ७० करोड नाफा गरेका छौं ।
यो नाफालाई प्रयोग गरेर ८ अर्ब पुँजी पु-याउने योजना हो । बैंकमा नेदरल्यान्ड्सको एफएमओको २० प्रतिशत, मलेसियन कम्पनीको ७ प्रतिशत गरी २ विदेशी संस्थाको २७ र कर्मचारी सञ्चय कोषको ९ प्रतिशत गरी ३ संस्थागत लगानीकर्ताको ३४ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
अन्य बैंकको तुलनामा एनएमबी बैंकमा के फरक छ ?
बैंकका वित्तीय सूचकहरू सबै सवल छन् । नियामक निकायले निर्देशन गरेभन्दा सुरक्षित तवरबाट बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छौ । बैंक सक्षम छ । हाम्रो पार्टनर भनेको नेदरल्यान्डको विश्वभरी ८५ देशमा लगानी गरेको बैंक छ । साथै बैंकको व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादन पनि अन्य बैंकको तुलनामा प्रभावकारी छ । अन्य बैंकभन्दा भिन्न छौ । भिन्न गर्ने योजनामा पनि छौं ।
हामीसँग नेपाल मै उत्कृष्ट कर्मचारीको टिम छ । बैंकको सञ्चालकमा पनि दक्ष तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयसम्मको अनुभव भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । अबको ५ देखि ६ महिनाको अवधिमा बैंक र एनएमबी माइक्रो फाइनान्सका गरी २ सयभन्दा बढी नेटवर्कबाट ग्रामीण भेगमा पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सक्नेछौं ।
भर्खरै मात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सन्तुष्ट बनाउन कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?
व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने एक्सपर्टिजको सन्दर्भमा म आफैं पनि करिब १८ वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बैंकमा काम गरेको व्यक्ति हुँ । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा व्यवसाय कसरी अघि बढ्छ भन्ने जानकारी छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको इतिहास धेरै लामो छैन । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू धेरै लामो अनुभव भएका छन् । नेपालमा लगानी गर्दा जोखिमको पक्षलाई पनि हेरिन्छ । नेपालमा लगानी गर्ने क्षेत्रमा रियल इकोनोमीलाई सपोर्ट हुने काम गर्ने हो । त्यो पनि विशेषगरी जलविद्युत्, पूर्वाधार तथा निर्माणको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । हाम्रो लगानीले नेपाललाई बेटर नेपाल र आत्मनिर्भर नेपाल बन्न सपोर्ट गरोस् भन्ने हो ।
नाफाका लागि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने काम हामीले गरेका छैनौं । हामीले माइक्रो फाइनान्स र साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रबद्र्धन गर्ने काम गर्छौं । यो सन्दर्भमा हाम्रा लगानीकर्ताको सोच र बैंकले काम गरिरहेको क्षेत्र मिलेकाले सहज रूपमा काम गरिरहेका छौं ।
ग्लोबल एलाएन्स फर बैंकिङ भ्यालुज भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य के हो ?
ग्लोवल एलाएन्स फर बैंकिङ भ्यालुज भनेको २८ देशका ३६ बैंक र हाल आएर ४३ बैंकहरूको सहभागितामा फरक किसिमको कन्फ्रेन्स गरेका छौं । यसले देश तथा कुनै पनि क्षेत्रको इकोनोमी, वातावरण र समाजलाई समेटेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
यसमा युरोपियन, एसियन तथा अमेरिकी बैंकहरू सहभागी छन् । बैंकको परिभाषा नै परिस्कृत गर्न लागेका छौं । यो एलाएन्सले बैंकले नाफासँगै सर्वसाधारण र त्यो क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले यसको होस्ट गरेका थियौं । त्यसमा हामीले नेतृत्व गर्छौं । अगामी दिनमा नेपालको बेस्ट बैंकको रूपमा स्थापित हुने योजनामा छौं । यो कन्सेप्ट मार्फत हामीले ‘प्राइस वार” गर्दैनौं ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख आकर्षक ब्याज